Kuphi Ukuxhumana Nge-imeyili Kuphethwe? | Martech Zone
Ngiwele kumkhuba omubi wokubeka ama-imeyili eceleni ukuze enzelwe inyanga noma ngaphezulu. Nginohlelo lokulanda ama-imeyili angenayo. Uma zingadingi ukunakwa noma isenzo sami ngokushesha kungapheli isikhathi esithile ukuze ngigweme izinhlungu zohlobo oluthile, ngibavumela nje ukuthi bahlale. Mhlawumbe yinto embi leyo. Noma mhlawumbe cha.
Lesi sihloko sonke sangicubungula nomngani (isisulu “sesikhathi sami sokulinda”) mayelana nokuthi ukusetshenziswa noma injongo (noma kokubili) kwe-imeyili kugudluka kanjani. Anginaso isifundo sesayensi engizosibhekisa lapha. Lokhu konke kusekelwe kuphela ekubonweni kwami ​​njengomxhumanisi webhizinisi futhi njengomuntu oye, eminyakeni edlule, wamukela ngokushesha kubuchwepheshe obusha. (Angikho onqenqemeni oluholayo lwejika, kepha ngisekuqaleni kwentaba emnene.)
Cabanga ngokushintsha kwendlela esixhumana ngayo ngokubhala. Ngikhuluma ngobuningi, hhayi ochwepheshe bezobuchwepheshe, ngendlela. Emuva ngosuku esasithumela ngalo izincwadi zeposi noma i-telegram ngezikhathi ezithile. Sicabange ukuthi singabasusa kanjani abasheshayo ngezithunywa nezinsizakalo zasebusuku. Futhi kwakukhona ifekisi. Lapho kufika i-imeyili, sasibhala okufana nezinhlamvu? ukuxhumana okude, okubhalwe kahle, okubhalwe ngofeleba, okupelwe nokuhlelekile ngenye indlela. Ngokuhamba kwesikhathi iningi lalawo ma-imeyili abe amalitha asheshayo. Manje, izinto ezifana ne-SMS, Twitter kanye ne-Facebook zisinikeza ubufushane nokushesha okusivumela ukuthi sisuke entweni eyodwa siye kwenye.
Yini okufanele ibe yi-imeyili? Okwamanje, ngisabheka ukuthumela i-imeyili yefomu ende, enenjongo, okuqukethwe komuntu ngamunye? okuthile okwenzelwe mina noma umamukeli uqobo, kepha akukwazi ukuvezwa ngezinhlamvu eziyi-140 kuphela. Futhi ngisayisebenzisa ukubheka izindaba engizicelile. Futhi-ke, ngisayisebenzisa ukukhuluma nabantu abangakwenzanga eminye imiyalezo noma imithombo yezokuxhumana.
Uma ngiseduze nalokho engikubonile, ukuxhumana kwethu nokuziphendukela kwemvelo kunomthelela omkhulu ekukhangisweni kwe-imeyili. Manje, ucabangani? Iqondisaphi i-imeyili? Sicela ubeke amazwana ngezansi. Noma, hey, ngithumele i-imeyili.
Tags: i-apei-imeyili ephathekayoizexwayiso zokuxhumana nabantuukwakha iqembu
I-Oct 25, i-2009 ku-10: i-52 PM
Ngicabanga ukuthi kuyohlale kunendawo ye-imeyili… noma okungenani okuthile okufana nokuthi sisebenzisana kanjani nge-imeyili namuhla. Sizohlala sidinga izindlela zokuxhumana ngqo okubhalwe ubuso nobuso, futhi sibe nezimo lapho lokho esikubhalayo kuzodinga ukuthi kuchazwe kabanzi kunezinhlamvu eziyi-140 ezivumelayo.
Ubuhle bobuchwepheshe obuvelayo ukuthi singanciphisa imfuhlumfuhlu yethu ye-imeyili ngokusebenzisa ezinye izindlela zokuxhumana ezingahambelani naleyo ncazelo. I-SMS yemilayezo emifushane esheshayo, i-IM yemilayezo eseduze yesikhathi sangempela, i-Twitter ne-Facebook yemiyalezo eyodwa kuya kokuningi, i-RSS yokwamukela izaziso, i-Google Wave yokubambisana kwethimba, njalo njalo.
I-Oct 25, i-2009 ku-10: i-55 PM
Ngiyavuma ukuthi i-imeyili isishintshile kancane kepha kwesinye isikhathi ngiyakhunjuzwa ukuthi ngiyingxenye yalelo qembu "lokutholwa ngaphambi kwesikhathi" ekuqaleni kwejika. Ngalesi sizathu, kwesinye isikhathi ngiyamangala lapho ngikhunjuzwa ngokuxhumana nabanye ukuthi abantu abaningi basathola "i-hang" ye-imeyili. Ngibheka i-imeyili njengesikhungo sokuxhumana sebhizinisi esisemthethweni, kuyilapho i-Facebook ingemiyalezo yami yangasese. Anginayo i-akhawunti yomuntu siqu ye-imeyili, i-akhawunti yebhizinisi kuphela. I-imeyili kimi futhi yibhokisi lokungenayo lami lemininingwane… hhayi nje ukuxhumana kuphela. Izincwadi zami zezindaba zingena nge-imeyili, izexwayiso zami, imiyalezo yami yebhizinisi, njll. Futhi ngisebenzisa i-Inbox Zero ukucubungula konke.
Okthoba 26, 2009 ngo-2: 33 AM
Enye yezinto engilwa nazo kakhulu nge-imeyili ukuthembela kwethu kuyo. Elinye lamakhasimende ami lingishayele ucingo kuleli sonto langibuza ukuthi kungani ngingawaphendulanga ama-imeyili akhe… ngiphetha ngokuthi umuntu othile uqale ukuhlaba umkhosi njengo-SPAM kanye nefolda yami ye-Junk Email.
Kuyishwa ukuthi i-imeyili ayizange iguquke. Futhi akusizi ukuthi abagcini be-imeyili (iMicrosoft Exchange ne-Outlook) basaqhubeka nobuchwepheshe beminyaka eyi-10 ubudala. I-Outlook isasebenza nge-processor yamagama esikhundleni sokuguqula ubuchwepheshe obusha !!!
Ngiyavuma ukuthi lobu bunye ubuchwepheshe busiza… kepha mhlawumbe sithandazela ukuthi kuvele okuthile okusha kwazise i-imeyili inezinkinga eziningi zokuncika.
I-Oct 26, i-2009 ku-1: i-45 PM
Ngabe ukubonile lokhu okuthunyelwe okuvela kuTim O'Reilly?
ngabe lokhu kushukumise okuthunyelwe kwakho:
I-Oct 26, i-2009 ku-9: i-19 PM
Ngithola iphuzu lakho ngisho bengilokhu ngisebenzisa i-imeyili yami kancane futhi iningi labangane bami lingithumela umyalezo o kwi-akhawunti yami ye-Social Network. Kepha ngicabanga ukuthi i-imeyili ayifile noma isondele ekufeni kwayo isiqiniseko sokuthi kunezici ezithile ezintsha ezingeziwe ezisazoba lapha isikhathi eside.